10 Tanànan'ny Scenic any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Tanànan'ny Scenic any Eropa
Ny tany midadasika eropeanina dia ny loharano angano sy angano fotsiny, toerana mahafinaritra sy tanàna mahavariana mitahiry ny tsiambaratelo taloha. Manakaiky ny tanàna afovoany cosmopolitan na mitodika any ambadiky ny tendrombohitra vatolampy, tsy hita isa ny isan'ireo vohitra mahafinaritra sy mahaliana any Eropa. Na izany aza, misy 10 tanàna mahafinaritra any Eropa izay ny hatsaran-tarehy sy ny majika dia mihoatra ny olon-drehetra.
Lalamby fitaterana no tena namana tontolo iainana fomba Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, The Tranonkala tapakila mora vidy indrindra eto amin'izao tontolo izao.
1. Jereo, Soisa
Ilay tanàna tsara tarehy indrindra any Soisa, Guarda dia tanàna kely, hita eo afovoan'ny ahitra maitso. Ambony ambonin ny lohasaha Engadin, na araka ny fiantsoan'ireo eo an-toerana azy, Engiadina dia mifehy ny fomba fijerin'i Swiss. Miorina amin'ny terrace de masoandro izy io, 300 metatra ambonin ny lohasaha, Miambina izay rehetra ho avy sy ho avy, ary koa ny fomban-drazana taloha toy ny manenjika ny ririnina.
Ny trano fotsy dia voaravaka sary hoso-doko soratra taloha antsoina hoe sgraffiti. Romansh, ilay fiteny an-toerana, izay tafavoaka velona ary mbola kabita anio.
Basel mankany Chur amin'ny lamasinina
Bern to Chur amin'ny lamasinina
Turin to Tirano amin'ny lamasinina
Bergamo to Tirano amin'ny Train
2. Tanànan'ny Scenic any Eropa: Cochem, Alemaina
Ilay vohitra izay matory eo amoron'ny renirano Moselle. Trano vita an-tsoavaly sy trano fisaka mahafinaritra eny amoron-dalambe tery. Mahafinaritra amin'ny fahalavoana, rehefa mitafy akanjo volamena ny ahi-maitso sy hazo, manampy amin'ny toerana mahafinaritra sy mahafinaritra ny Cochem tsara tarehy.
Voahodidina tanimboaloboka sy havoana, Kanana Cochem dia postcard-tonga lafatra. Ny fomba tsara indrindra hiaina ny vohitra sy handraisana ny fahitana rehetra ao an-tanàna dia amin'ny alàlan'ny bisikileta.
Frankfurt mankany Cochem amin'ny lamasinina
Bonn to Cochem amin'ny lamasinina
Cologne mankany Cochem amin'ny lamasinina
Stuttgart mankany Cochem amin'ny lamasinina
3. Dinant, Belzika
Eo anelanelan'ny hantsambato mideza, amoron'ny renirano Meuse, mipetraka ny tanàna tsara tarehy ao Dinant ao amin'ny faritra Wallonia. Toerana manjavozavo, ririnina, na lohataona, Io tanàna kely io dia tena mahavariana amin'ny toetr'andro sy ny andro. Ny fomba fijery lehibe dia mivoaka avy any amin'ny tampon-tampon-trano ihany.
Ny kaody ao Collegiale Notre-Dame De Dinant dia marika manasaraka eo ambadiky ny tendrombohitra taitao mainty. Trano miloko marefo sy sambo eo anoloana, fenoy ny fomba mahavariana.
Raha manam-potoana fanampiny, mitsidika ny Castle Crevecoeur akaiky, Zaridain 'i Annevoie, ary Chateau de Veves ho an'ny fijery mitovy amin'ny paositra.
Brussels amin'ny Dinant amin'ny lamasinina
Antwerp to Dinant by lamasinina
Ghent to Dinant amin'ny lamasinina
Liege amin'ny fisakafoanana amin'ny lamasinina
4. Tanànan'ny Scenic any Eropa: Norcia, Italia
Ao ambadiky ny rindrina fiarovana, eo afovoan'ny havoana maitso, any Atsinanana Umbria, ho hitanao ny tanàna kanto Norcia. Ity tanàna kely medieval ity dia tsara tarehy ary tena mahavariana amin'ny andro lohataona rehefa mamony amin'ny feo miloko marefo ny manodidina.
fiangonana, Lapa lapa italiana, ampio ny fomba fijerin'i Norcia mahavariana. koa, ny reniranon'i Nera dia toerana iray hafa hitrandrahana sy mankafy ny fomba fijery mahafinaritra an'ny faritra Umbria tsara tarehy any Italia. Teny an-dalana dia azo antoka fa hitady ireo truffle malaza, ary manandrana ny lasopy spaghetti na frittata miaraka amina paosy. Tsotra tsotra izao izany!
5. Ataovy mitovy tantana, The Netherlands
Raha toa ianao ka mitsangantsangana any Holland ianao dia halainao ny sahan'ny tulip epik, avy eo dia mitsangàna Lisse mahafinaritra. Io tanàna tsara tarehy io dia marina 45 minitra lavitra an'i Amsterdam.
Lisse dia mety ho iray amin'ireo tanàna kely indrindra any Holandy, fa trano hody 7 bolam-boninkazo tapitrisa taonina namboly tao amin'ny zaridainan'i Keukenhof. Nanomboka tamin'ny faran'ny volana martsa ka hatramin'ny tapaky ny volana Mey, namolavola ireo loko tsara tarehy sy maro loko ireo bolam-bato ireo. Noho izany, Ny misavoritaka dia tsy isalasalana fa ny loveliest indrindra amin'ny lohataona ary ianao raha misy sary sy fomba fijery tsy hay hadinoina.
6. Tanànan'ny Scenic any Eropa: St. Gilgen, Aotrisy
Fantatry ny rehetra ny Hallstatt majika, fa i Aotrisy no fonenan'ireo vohitra sy tanàn-dehibe mahafinaritra. Ny iray amin'ny vohitra tsara tarehy indrindra any Eropa dia any Aotrisy. St. Tanànan'ny Gilart indray izy no nipetraka taloha, ary mipetraka eo amoron'ny Farihin'i Wolfgang ny tanàna.
Azonao atao ny mandinika an-tongotra amin'ny alàlan'ny tongotra na bisikileta, na avy anaty fiara misy tariby. Raha tsy matahotra tahotra ianao, avy eo, ireo fomba fijery misokatra amin'ny tariby tariby dia hanaisotra ara-bakiteny anao. Ny fomba fijery mahafinaritra ao an-tanàna dia azo antoka fa aingam-panahy avy amin'ireo mpanakanto Viennese.
Munich mankany Salzburg amin'ny lamasinina
Vienna mankany Salzburg amin'ny lamasinina
Graz mankany Salzburg amin'ny lamasinina
Linz mankany Salzburg amin'ny lamasinina
7. St. nahay, Frantsa
Trano an-trano frantsay Delicacies Foie Gras sy truffles, ilay tanàna kelin'i St. Genius dia 2 ora avy any Bordeaux. Io no manome antoka ny tanimboaloboka mahafinaritra, izay hahafahanao mankafy vera divay tsara rehefa mahafinaritra anao ilay vohitra sy ambanivohitra.
St. Ny anaran'ny tanàna Genies dia manome antsika 10 Tanàna mahafinaritra ao Eropa noho ny trano vato misy havoana. Ankoatry ny, the 12th-century church and 13th-century castle are right in the center of the village. Lalana miangatra no hitondra manerana ny tanàna sy ireo trano vato miloko mainty mankany amin'ny fomba fijery sy toerana mahavariana indrindra.
St. Genies mampiseho ny haben'ny tantara fairy i Frantsa dia voatahy. Azonao atao ny mankafy ny seho dia lamasinina manerana an'i Frantsa.
Nantes mankany Bordeaux amin'ny lamasinina
Paris mankany Bordeaux amin'ny lamasinina
Lyon mankany Bordeaux amin'ny lamasinina
Marseilles mankany Bordeaux amin'ny lamasinina
8. Tanànan'ny Scenic any Eropa: Bibury, England
Ny trano fitehirizam-bato misy tafo matevina miaraka amam-boninkazo maitso manodidina azy no mahatonga an'i Bibury ho iray amin'ireo tanàna mahafinaritra indrindra any Eropa. Aza hadino foana ny mandalo Arlington Row, ny lalana mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra.
Ny fandehanana dia hitondra anao hiverina indray any amin'ny fiainana tamin'ny taonjato faha-17 tany Bibury. Ilay tanàna tsara tarehy indrindra any Angletera dia mipetraka eo amoron'i River Coln. Io no toerana tsara indrindra nahantona ny volon'ondry avy amin'ny trano fonenan'ny mpanenona. Ny tany bibury dia tonga lafatra amin'ny a piknik hariva na mandeha maraina be alohan'ny andian'olona mpizahatany hanelingelina ny entany milamina sy matory.
Amsterdam mankany London amin'ny fiaran-dalamby
Paris mankany London amin'ny fiaran-dalamby
Berlin mankany London amin'ny alàlan'ny Train
Brussels mankany London amin'ny fiaran-dalamby
9. Lindau Any Alemaina
Ny tanàna Lindau dia eo amin'ny sisin-tanin'i Aotrisy miaraka amin'i Alemana, ao amin'ny Allemagne Bavarian. Iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra a fialan-tsasatra latsaka any Eropa. Any amoron-tsiraka any Constance, fantatra koa amin'ny hoe Bodensee, zenika ity vohitra ity, miaraka amin'ny tetezana iray mampifandray ny tanibe sy ny nosy.
Ny sasany amin'ireo fomba fijery mahafinaritra eto an-tanàna dia lalana Maximilianstrasse, ny jiro tranainy tamin'ny taonjato faha-13, ary mazava ho azy fa ny Tanàna taloha, Altstadt.
Lindau dia vatosoa miafina tany Alemana ary vohitra iray dia mendrika ny fitsidinao amin'ny dianao manaraka. Misy lamasinina Eurocity avy any Munich, Zurich, ary Stuttgart.
Berlin to Lindau amin'ny Train
Munich mankany Lindau amin'ny lamasinina
Stuttgart mankany Lindau amin'ny Train
Zurich mankany Lindau amin'ny lamasinina
10. Tanànan'ny Scenic any Eropa: Czech Krumlov, Repoblika Tcheky
Lova Iraisam-pirenena UNESCO toerana, Cesky Krumlov vohitra eto Bohemia dia mifangaro Renaissance, gôtika, ary ny maritrano Baroque. Nifandray tamin'ny reniranon'i Vltava, Cesky Krumlov dia iray amin'ireo renirano mahafinaritra indrindra any Eropa. Ny sarin'ny trano eo amoron-tehezana miaraka amin'ny natiora mahafinaritra ao ambadika, dia azo antoka fa iray amin'ireo fijery mahafinaritra indrindra any Eropa. Izany no antony i Cesky Krumlov 10 Tanàn-dehibe mahafinaritra any Eropa no mitana lisitra.
Manome torohevitra tokoa izy hiakatra eo amin'ny lapan'ny Cesky Krumlov ho an'ny sary tsy hay hadinoina nataon'i Cesky Krumlov, Renirano Vltava, ary natiora mahafinaritra manodidina ny faritra Bohemia.
Tanànan'ny Scenic any Eropa
Ny sasany amin'ireo vondron'olona marobe mahafinaritra indrindra any Eoropa dia miafina amin'ny andiany mpizahatany any amin'ireo tendrombohitra lehibe. Mety tsy ho takatry ny sain'ireo vato soa ireo izany, saingy miaraka amin'ny teknolojia ankehitriny, akaiky kokoa noho ny taloha izy ireo. Azonao atao ny mitety tanàna rehetra fitateram-bahoaka, tamin'ny dia lavitra lamasinina namakivaky an'i Eoropa. Tao anatin'ny ora vitsivitsy fotsiny dia mety nirenireny ianao, mahavariana sy manaitra sary momba ireo kolontsaina sy fomba fijery miafina ireo.
eto amin'ny Save A Train, dia ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakilan'ny fiaran-dalamby mora indrindra any amin'ireo tanàna mahafinaritra eto Europe.
Ianao ve te-hametraka ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginay “10 Tanànan'ny Scenic any Eropa"Eo amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/ ‎– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
beautifuldestinations beautifulvillageseaurope Fairytaletowns scenicvillageseurope tanàna